Inona avy ireo mpanangona hafanana sy ny fomba fiasan'izy ireo | Green Renewable
Betsaka ny olona manana hafanana herinaratra ao an-tranony ary mahita amin'ny faran'ny volana ny fiakaran'ny vidin'ny herinaratra ao aminy. Ny fihinanana herinaratra mifandraika amin'ity karazana hetsika ity dia miakatra haingana amin'ny vanin-taona mangatsiaka. Ny herinaratra amin'ny maha-fomba fanafanana azy dia tena ahazoana aina sy mahomby, nefa raisina ho iray amin'ireo lafo indrindra eny an-tsena. Na izany aza, mba hisorohana ireo olana ireo dia misy mpanangona hafanana.
Inona izany momba ny mpanangona hafanana? Raha te hahalala ny fomba hitehirizana araka izay azo atao amin'ny fanafanana ianao dia eto no hanazavana ny zava-drehetra mifandraika amin'ny mpanangona. Mila manohy mamaky fotsiny ianao 🙂
1 Inona avy ireo mpanangona hafanana?
2 Rafitra fanamafisana herinaratra
3 Karazan'ireo mpanangona hafanana
4 Fomba fiasa lehibe
Inona avy ireo mpanangona hafanana?
Izy ireo dia fitaovana tompon'andraikitra amin'ny fanovana ny angovo herinaratra ho lasa angovo hafanana amin'ny vidiny ambany indrindra. Izany hoe, amin'ny alàlan'ny herinaratra dia ahafahantsika manafana ny efitranonay fa amin'ny vidiny ambany kokoa noho ny amin'ny hafanana mahazatra. Natao handany angovo elektrika izy ireo mandritra ny vanim-potoana mihena. Ny sara rehetra dia miaraka amin'ny fandaharam-potoana iray izay mora kokoa ny herinaratra. Ireo fitaovana ireo dia tompon'andraikitra amin'ny fanovana angovo elektrika amin'ny fotoana mora indrindra amin'ny andro ary hanangona azy amin'ny endrika hafanana. Ho hita io hafanana io rehefa ilaintsika izany.
Ireo fitaovana ireo dia mitondra tombony lehibe amin'ny fampiasana azy, satria azontsika ampiasaina ny hafanany isaky ny maniry isika ary hampihena ny vidiny. Ho fanampin'izany, manana tombony hafa ny mpanangona hafanana toy ny:
Tsy misy fatiantoka hafanana mandritra ny fampiasana. Mitranga izany satria izy ireo dia tsy vonona afa-tsy ny hitaky ny angovo optimum takiana. Satria tsy tehirizina be loatra ny angovo dia tsy misy fatiantoka.
Mitsitsy angovo bebe kokoa ary manome fiononana faran'izay betsaka. Ny fananana angovo rehefa ilaina dia tena ahazoana aina. Izy io dia manana rafitra fandaharam-potoana amin'ny enta-mavesatra amin'ny ora fihenan'ny ora hiantohana ny tahiry eo anelanelan'ny 50 sy 60%.
Tsy ilaina ny fanitsiana aorian'ny fametrahana azy.
Izy io dia manana safidy fampidirana ao amin'ny rafitra fitantanana lavitra.
Ny famolavolana dia matevina, noho izany dia tsy sarotra ny mampiditra azy amin'ny haingon-trano. Ankoatr'izay, mora ny fikirakirana sy ny fikojakojana azy.
Rafitra fanamafisana herinaratra
Betsaka ny olona nametraka fanafanana tao an-trano. Ireo olona rehetra nisafidy ny hanafana, dia afaka mankafy fitaovana toy ny:
Radiatera menaka na thermoelectric. Izy io dia iray amin'ireo mpanangona antitra indrindra misy. Miasa amin'ny fanafanana menaka mafana izy ireo. Rehefa mitranga izany dia miakatra ny mari-pana rehefa mivoaka ny hafanana voafandrika ao anaty menaka.
Gorodona taratra. Ny fanamainana ambanin'ny tany dia fametrahana izay misy tambajotra fantsona na tariby apetraka izay mitondra ny rano mafana ao ambanin'ny tany. Manampy ny tany hamiratra ny hafanana ary hampitombo ny mari-pana amin'ny andro mangatsiaka indrindra amin'ny ririnina. Nanjary iray amin'ireo rafitra maoderina sy mahomby indrindra izy io, na dia lafo aza ny vidiny voalohany ary mitaky asa.
Paompy hafanana Ny tombony an'io karazana mpanangom-bokatra io dia ny tsy fandaniany angovo be. Ny lafy ratsy dia ny efitrano misy azy ihany no manafana azy. Ny hafanana dia mirona haingana dia haingana, ka tsy dia mendrika loatra.
Takelaka mirehitra. Izy ireo dia onja mafana izay mampitombo ny hafanan'ny efitrano ametrahana azy amin'ny fomba mitovy.
Mpanangona hafanana. Araka ny voalaza dia fanoherana elektrika izy ireo izay mitahiry hafanana rehefa ambany ny tahan'ny herinaratra ary mitahiry azy.
Mpanelanelana. Izy ireo dia fitaovana izay tompon'andraikitra amin'ny fidirana amin'ny rivotra mangatsiaka sy fandroahana ny rivotra mafana noho ny fanoherana sy thermostat sasany ananany.
Karazan'ireo mpanangona hafanana
Misy karazany roa ny mpanangona hafanana azon'ny mpanjifa apetraka ao an-tranony:
Static. Ity maodely ity dia afaka mamoaka angovo hafanana voajanahary. Amporisihina ny toerana onenana maharitra satria tsy miovaova ny maripana ampionony.
Dynamic Manana mpankafy manampy amin'ny fampitana angovo izy ireo. Ny fitokanany dia mandaitra kokoa noho ny static. Ny fifehezana ny famoahana angovo dia ahafahan'izy ireo mitantana tsara kokoa ny mari-pana amin'ny faritra samihafa ao an-trano.
Mba hanatsarana ny fandaniana ara-toekarena, ny mazàna atao dia ny fampifangaroana ireo karazana mpanangona roa ao an-trano. Ny statices dia apetraka amin'ny faritra midadasika kokoa ary ireo mavitrika dia ampiasaina amin'ny faritra miserana.
Rehefa misafidy izay accumulator mety indrindra amin'ny antony ara-toekarena dia azo lazaina fa ilay mavitrika. Izany dia satria mamela ny fifehezana tsara kokoa ny vidiny sy ny fizarana hafanana ao amin'ireo efitrano arakaraka ny filàna.
Ny rafitry ny fanamainana ireo mpangorona dia manana habaka fitehirizana voafetra. Afaka manangona angovo ary tazomy hanana izany fa rehefa takiana. Azo ahitsy izy io mba hiasa mandritra ny ora maro izay ambany ny tahan'ny herinaratra.
Zava-dehibe ny manamarika fa ireo mpanangom-bokatra ireo dia tsy maintsy miaraka amina insulated tsara ao an-trano. Raha tsy manana varavarankely ahafahantsika mifehy ny hafanana na ny hatsiaka avelantsika hiditra sy hivoaka ao amin'ny efitrano na ampy firakotra isika, dia tsy hisy dikany izany.
Ny fametrahana ireo fitaovana ireo dia tena tsotra ary tsy mila asa akory. Tena ambany ny fikojakojana azy. Mila fanadiovana isan-taona fotsiny sy fanovana batterie an'ny chronotherostats fotsiny izy io.
Satria tsy ny rehetra no tombony amin'ny karazana fitaovana elektrika ampiasaintsika, amin'ity tranga ity dia holazaintsika ny fatiantoka ananany. Ny enta-mavesatra apetraka dia tsy maintsy atao mialoha. Manery ny mpanjifa hampiasa ny filan'izy ireo manokana izany. Raha tsy fantatsika raha mangatsiaka na tsy amin'ny fotoana iray dia tsy afaka mampiasa azy isika raha mila izany avy hatrany. Mety hitranga ny fitsidihana tsy ampoizina ataontsika ary tsy afaka manolotra hafanana isika noho ny tsy fanangonana azy taloha.
Alohan'ny ahazoana mpiorina dia tokony handinika lafin-javatra hafa toy ny:
Ny vidiny avo lenta amin'ny fitaovana tsirairay. Fampiasam-bola voalohany io, na dia mandoa fotoana aza izy io.
Raha manana haba ny mpanjifa amin'ny fanavakavahana isan'ora dia tsy maintsy atao amin'ny alina ny famerenana ny angovo.
Tsy dia misy fanaraha-maso loatra amin'ny famoahana hafanana.
Miaraka amin'ny famakafakana ireo lafin-javatra ireo dia manantena aho fa afaka misafidy tsara ny rafitry ny fanafanana 🙂
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » Mitsitsy angovo » Toekarena an-trano » Inona avy ireo mpanangona hafanana ary ahoana ny fiasan'izy ireo?